Sergio Aguero Oo Labo RIKOODH Oo Waa Weyn U Dhigay Premier League Xilli Man City Ay Xasuuqday Aston Villa | Laacib.net
Sergio Aguero Oo Labo RIKOODH Oo Waa Weyn U Dhigay Premier League Xilli Man City Ay Xasuuqday Aston Villa
January 12, 2020 Balaleti 0
Manchester City ayaa 6-1 ku xasuuqday kooxda Aston Villa oo marti loogu ahaa garoonka Villa Park iyadoo City ay ku soo laabatay kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka islamarkaana hogaanka Liverpool ay ka dhigtay 14 dhibcood.
Sergio Aguero oo seddexleey dhaliyay kulankii caawa ayaa dhigay rikoor cusub oo Premier League ah isagoo noqday xiddig ugu seddexleyda badan taariikhda Premier League isagoo dhaliyay seddexleydiisii 12aad.
11 – Alan Shearer
09 – Robbie Fowler
Rikoodh kale uu jabiyay ayaa ah inuu noqday ajnabiga ugu goolasha badan taariikhda Premier League isagoo dhaliyay goolashiisii 177aad wuxuuna rikoodhkaan ka qaaday Henry oo ku hayay 175 gool.
Rikoodhka Gooldhalinta Ajnabiga
177 – Sergio Aguero
Qaybtii hore ee ciyaarta waxay Manchester City gumaad wayn u gaysatay kooxda Aston Villa iyada oo Riyad Mahrez uu laba gool dhaliyay waxaana min hal gool raacsaday Sergio Aguero iyo Gabriel Jesus oo muddo dheer kadib shaxda Guardiola ku soo wada bilawday.
Manchester City waxay ku soo laabtay kaalinta labaad ee Premier League kadib xasuuqa ay u gaysatay Aston Villa iyo guuldaradii xalay soo gaadhay Leicester City.
Qaybtii hore ee ciyaarta waxay kooxda martida loo ahaa ee Aston Villa u ahayd mid ceeb iyo fadeexad ah iyaga oo arkay burburkooda intii ayna xataa ciyaartu socon 30 kii daqiiqo ee ugu horeeyay.
Waxaa goolasha daadka ahaa ee Man City bilaabay Riyad Mahrez kaas oo daqiiqadii 18 aad goolka furitaanka Man City ku dhaliyay caawin uu ka helay Sergio Aguero waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Cith hogaanka ku qabtay.
Laakiin goolkani waxa uu Aston Villa iyo jamaahiirta kooxdeeda ee Villa Park ka soo xaadiray ka dhigay kuwo musiibo wayn markhaati ka noqday iyada oo Man City markiiba baadi goob u gashay goolasha kale.
Daqiiqadii 24 aad Riyad Mahrez ayaa dhaliyay goolka labaad ee uu kooxdiisa City u dhaliyay waxaana caawin u sameeyay Gabriel Jesus iyada oo ciyaartu noqotay 2-0 ay Man City hogaanka ku dheeraysatay.
Laakiin daqiiqadii 28 aad waxaa ciyaarta hursada u diray Sergio Aguero kaas oo gool taariikhda lagu qoray ku dhaliyay caawin uu ka helay De Bruyne waxayna ciyaartu si deg deg ah u noqotay 3-0 ay City ku dubanayso Aston Villa.
Dhamaadkii qaybtii hore waxay Man City heshay goolka afraad ee ay ceebta wayn ugu sii xambaarisay Aston Villa waxaana gool dhaliyaasha City ee kulankan ka mid noqday Gabriel Jesus oo ka faa’iidaystay caawin labaad oo uu sameeyay Kevin De Bruyne.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 4-0 ay Man City ku xasuuqaysay Aston Villa, waxayna natiijada ciyartu ahayd mid si buuxda loogu sii kala calaf qaaday.
Qaybtii labaad ee ciyaarta Man City waxay ogayd in ay saddexda dhibcood isku hubsatayu balse waxay sii wadeen in ay goolal kale raadiyaan halka Aston Villa uu hadafkeedu ahaa in ay goolasha iska soo yarayso.
Laakiin Sergio Aguero ayaa dhaliyay goolkiisii labaad ahna goolkii shanaad ee Manchester City, wuxuu goolkaas noqday goolkiisii 176aad ee Premier League isagoo noqday xiddiga ugu goolasha badan horyaalka ee xiddigaha ajnabiga, wuxuuna jabiyay rikoodhkii Thierry Henry.
Aguero ayaa dhameystirtay seddexleydiisa ka dib baas uu ka helayu Riyad Mahrez wuxuuna jabiyay rikoodh kale isagoo noqday xiddiga abidg ugu seddexdeyda badan taariikhda Premier League isagoo dhaliyay seddexleydiisii 12aad.
El Gazhi ayaa gool rogoore ah waqtigii dhamaadka ciyaarta u soo celiyay Aston Villa iyadoo ciyaarta ay ku soo dhamaatay 6-1 oo ay Man City ku badisay.
Shaxda Rasmiga Ah Ee Aston Villa vs Man City - Sterling Oo Keyd La Geliyay, Aguero & Jesus Oo Ku Soo Wada Bilowday
Xiddiga Sida Weyn Loola Xiriirinayo Man United Ee Donny van de Beek Oo Go'aan Ka Gaaray Mustaqbalkiisa - Miyuu Imaanayaa Old Trafford?